Minisitry ny Teleferika
Accueil » Chronique » Minisitry ny Teleferika
Rahoviana no ho tapa-kevitra mba hiteny ny Maintimolaly, Raiamandreninny Mpianatra, Mpianatra, ao amin’ny Kolejy Saint-Michel Ampariabe sao sanatria ka hanitsaka ny tokotany filalaovana, izay tsy mbola nandrimbinana hatramin’ny taona 1898 nifindran’ny Kolejy avy any Ambohipo, ity tetikasa TPC (teleferika) ity ? Ny Jesoita moa, izay nanorina ihany koa ny Katedraly Andohalo (notokanana ny 17 desambra 1890), gina tsy miloa-bava hatreto.
Raha ny eny Andohalo, tsy ny Katolika ihany no voatohina satria manolotra eo avy hatrany ihany koa ny «Paroisse internationale» sy ny Katedraly anglikana : ity farany, vao nampiantrano (23 oktobra 2017) ny zanakavavin’ny Mpanjaka Anglisy, tonga nanamarika niaraka tamintsika ny faha-200 taonan’ilay fifanarahana iraisam-pirenena voalohany teo amin-dRadama I sy ny Governora britanika ny Nosy Maorisy Robert Farquhar.
Tsy Andohalo ihany koa anefa no voatohina fa ny atin-Tantaran’ny vohitr’Antananarivo mihitsy : efa tamin’ny tany gasy avokoa ny Lapan’Andafiavaratra (1872), ny trano fitsarana Ambatondrafandrana (1881), ankoatra ny Fiangonana Ambohitantely (notokanana 24 jolay 1872) sy ny Fiangonana Ambonin’Ampamarinana (notokanana ny 28 martsa 1874).
Azo heverina ve izany «pylône» 30 ka hatramin’ny 40 metatra izany, hanalokaloka sa hisavika an’i Manjakamiadana sy Andafiavaratra ? Maninona raha lazaina mazava ary arahin-tsary amin’ny vahoaka izay kasaina (fa tsy boky 30 takelaka mbola samborina amin’ny «rohy internet» na voatery hisahiranana eny amin’ny biraon’ny Firaisana sy Fokontany) ? Inona marina ohatra ilay hoe «plateau du Rova», Antsahatsiroa, Ambavahadimitafo, Ambatondrafandrana ? Fanontaniana hafa : raha eny Andohalo sy manodidina ny Rova, aiza no hametrahana gara hibahana 30 x 17 metatra ary 1530 m2 ho «bazary»
Antsahatsiroa mantsy, tsy hoe ireo Trano Kotona roa akanga sisa nanamborana ihany. Tsara mamaky bokin-Tantara ny mpitondra isan-tokony mba tsy hanafintohina ny «Hanitra nentin-drazana» : «Dia nampively rano sy nampisotro vokaka ary nampilefona omby teo Andranomalahelo, farihy ambodin’ Antsahatsiroa, Andrianampoinimerina». Voarakitra ao amin’ny Tantara Ny Andriana, takila 818-819, izany lovantsofina izany.
Ao amin’ny «Firaketana» (II, takila 355) indray : Rehefa nahazo an’Analamanga, hono, Andrianjaka ka niakatra ho any an-tampon-tanana, dia nandalo an’Ambatondrafandrana. Nitodika niankandrefana hono izy ka nataony hoe «Antsahatsiroanomandidy» io lohasaha hoe Antsahatsiroa ankehitriny io. Toerana fikabariana teo nialoha ny namindran’Andriamasinavalona ny kabary ho eo Andohalo. Tamin’ny andron’Andrianampoinimerina dia nataony fanamelohana ny olona mikasa hanangana Andriankafa ny teo Antsahatsiroa.
Ho tohin’ny «Saino ihany lahy» (Mamalan-kira 24.11.2021), mbola mahatsiaro ho tsy afaka adidy ny tena ka manantitra ny ala-nenina : Tsy hahasoa re, Tompoko, ny faniratsirana ny Tantara. Tsy hahavanona, na iza na iza, ny di-doha satria tsy refesi-mandidy. Ary hanody, ny fiaraha-monina, ny fifampihantsiana sy fifanafintohinana.
Prévention de la covid-19 – « La vaccination généralisée assure un retour à la vie normale »